नेपाल हङकङविरुद्धको पहिलो खेलमा हार्नेुका मुख्य कारण के के होलान ? | Nepal Cricket News | Cricnepal.com
नेपाल हङकङविरुद्धको पहिलो खेलमा हार्नेुका मुख्य कारण के के होलान ?
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत हङकङविरुद्धको पहिलो खेलमा पराजित भएसँगै नेपालले शीर्ष चारमै रहेर विश्वकप छनोट खेल्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ। प्रतियोगिताको शीर्ष चारमा रहने टोलीले अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने विश्वकप छनोट खेल्न पाउनेछन् भने एक दिवसीय मान्यता पनि पाउनेछन्।
हारसँगै नेपालको शीर्ष चारमा रहेर विश्वकप छनोट खेल्ने र एकदिवसीय मान्यता पाउने सम्भावना पनि सकिएको छ।
हङकङपुगेपछि कप्तान पारस खडका र जगत टमाटाले जितको विकल्प नभएको र जितका लागि नै खेल्ने बताएपनि नतिजा भने ठिक उल्टो बन्यो ।
नेपाली टिम के के कारणले हार्यो त
१) ओपनिङ् जोडीको साझेदारी
हङकङ विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित हुनुको मुख्य कारण ओपनर पनि रह्यो। मात्र १९५ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको नेपालका ओपनिङ जोडिले धर्ये भएर खेल्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन ।
च्याम्पियनसिपमा छैठौं पटक ओपनिङ परिवर्तन गर्दै यसपटक ज्ञानेन्द्र मल्ल र सागर पुनलाई पठाइएको थियो। साझेदारी मात्र होइन उनिहरुले ब्यक्तिगत रुपमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकेनन । पाँचौ ओभरमा सागर ३ रनमा तनवीरको बलमा अहसानको हातबाट क्याच हुँदा ज्ञानेन्द्रसँग उनको साझेदारी जम्मा १० रनको थियो। त्यसपछि उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले महत्वपूर्ण खेलमा आफ्नो क्षमता अनुरुप खेल्न सकेनन्। २९ बलमा ४ चौका प्रहार गर्दै २१ रनमा उनी पभिलियन फर्किए।
२) कमजोर ब्याटिङ
एसोसियट राष्ट्रहरुमा नेपालको बलिङ उत्कृष्टको सुचिमा पर्छ । तर, हरेक प्रतियोगितामा नेपाली ब्याट्सम्यानहरुले क्षमता अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन । ओपनिङ जोडीको समस्या हङकङ विरुद्ध पनि देखियो । मैदान सानो भएकाले तीन सय रनको लक्ष्य पनि पछ्याउन सकिने आँकलन गरिएका बेला नेपाली ब्याट्सम्यानले दुई सय मुनिको लक्ष्य पनि भेटाउन सकेनन्। नेपालका पारस खड्का, ज्ञोनेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी जस्ता अनुभवी ब्याट्सम्यानले क्रिजमा जम्न सकेनन भने अरु खेलाडीले पनि राम्रो साझेदारी गर्न सकेनन । यसमा कप्तान पारस खडकाले नै भनेका थिए खेलाडीले राम्रो ब्याटिङ गरेनन । नेपाली टिमका लागि हारको अर्को कारण बन्यो ।
३) पिचलाइ राम्रोसँग बुझ्न नसक्नु
हङकङसँग पराजित हुनुको अर्को कारण पिचको अवस्था पनि हो । हङकङको घरेलु मैदानमा १२ वर्षपछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्दै थियो।
यसअघि २००५ मा नेपाली टिम हङकङ आएर खेल्दाका खेलाडीमा हाल कप्तान पारस खड्का र शरद भेषावकरले खेलेका थिए। शरद अस्वस्थताका कारण नखेल्ने भएपछि लगभग सवै टोलीका सदस्य पहिलो पटक हङकङको मैदानमा खेल्दै थिए। सबै खेलाडीका लागि यो पिच विलकुल नया थियो । यो मैदानमा पछिल्ला सात खेलमा छ खेलमा पहिलो ब्याटिङ गर्ने टिमले जितेका थिए । तर नया पिचलाइ बुझ्न टिमले पहिले बलिङको निर्णय लियो तर सफल भएन ।
४) अनुभवी खेलाडीको अभाव
भेट्रान अनुभवी स्पिनर शक्ति गौचनले नेपाली टोलीको प्रारम्भिक घोषणा हुनुअगावै पायल्सका कारण खेल्न नसक्ने बताइसकेका थिए। अर्का अनुभवी र भरपर्दा ब्याट्सम्यान शरद भेषवाकर पनि अन्तिम समयमा खेल्न पाएनन । अस्वस्थताका कारण ।
राष्ट्रिय टोलीका यी दुवै अनुभवी खेलाडीहरुको अभाव शुक्रबारको खेलमा पनि देखियो। च्याम्पियनसिपमा शरद नेपालका तर्फबाट दोस्रो सर्वाधिक रन स्कोर गर्ने खेलाडी थिए। हङकङ विरुद्ध राम्रो रेकर्ड राखेका शक्ति विकेट दिने खेलाडीका रुपमा चिनिन्थे। तर, दुबै खेलाडीको अनुपस्थितिमा नेपालले हङकङविरुद्धको पहिलो खेलमा फराकिलो हार चाख्नुपर्यो।